भारद्वाज संस्कृति सम्वद्र्धन केन्द्रको नेतृत्वमा डा. शास्त्रदत्त – An Online Entertainment News Portal
HomeEventभारद्वाज संस्कृति सम्वद्र्धन केन्द्रको नेतृत्वमा डा. शास्त्रदत्त
भारद्वाज संस्कृति सम्वद्र्धन केन्द्रको चौथो महासभा सम्पन्न भएको छ । गत शनिवार लाजिम्पाटस्थित डिल्लीरमण रेग्मी प्रतिष्ठानको सभाकक्षमा सम्पन्न महासभाले डा. शास्त्रदत्त पन्तको नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मतले चयन गरेको छ ।